အမှတ်အသားများ (Tags): Arcade ဂိမ်းသမိုင်း
arcade ဂိမ်းသမိုင်း၏စကားပြောသော, တီဗီခလုတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, Arcade ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ Arcade Hall ၌လူအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းသဘောဖြစ်သည်။. အသက် ၇၀ နှင့် ၈၀ ပြည့်နှစ်များ၌မွေးဖွားခဲ့သောမိတ်ဆွေများစွာသည်များစွာသောသူတို့ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အမှတ်အသားများ (Tags): vending machine
အရောင်းစက်များသည်ဖောက်သည်များနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ငွေရှာဖွေစက်များအသုံးပြုသည့်အလိုအလျောက်စက်များဖြစ်သည်. သူတို့ကဖောက်သည်တွေဖြစ်တဲ့မုန့်ထုတ်ကုန်တွေ ၀ ယ်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်, အဖျော်ယမကာများ, အရက်, စီးကရက်, နှင့်ထီလက်မှတ်များ (ငွေရှင်းကောင်တာများရှိဆိုင်များနှင့်မတူသည်). ဒါဟာစီးပွားဖြစ်အလိုအလျောက်များအတွက်လေ့အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအချိန်နှင့်တည်နေရာအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်,…
Arcade ဂိမ်းများအကြောင်းပြောဆိုခြင်း, တီဗီခလုတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, Arcade ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ Arcade Hall ၌လူအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းသဘောဖြစ်သည်။. အသက် ၇၀ နှင့် ၈၀ ပြည့်နှစ်များ၌မွေးဖွားသောမိတ်ဆွေများစွာ၌များစွာရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
သူတို့အားတည်မြဲ Arcade ဂိမ်း၏, မင်းဘယ်လောက်ကစားခဲ့တာလဲ? (Arcade ဂိမ်း)
အချိန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, တစ်ချိန်ကခေတ်ကိုကိုယ်စားပြုသော Arcade ဂိမ်း Hall သည်လူတို့၏အမြင်မှဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးဂိမ်းခန်းမအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်. သို့သော်, အဲဒီခေတ်ကဒီမှာလာသူမြားအဘို့, ငါနေဆဲအတိတ်၏ရှုပ်ထွေးဂိမ်းခန်းမလက်လွတ်. အခု, လုပ်ကြရအောင် ...